2013 ~ brazesh
बन्द छ रे
अलि पहिले जनआन्दोलनको बेला कर्फ्यु लागेको भोलिपल्ट अप्रिल ८, २००६ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कविताको केही अंश अहिलेको बन्दको लागि पनि मिल्दो हुने रहेछ । कर्फ्युलाई बन्द मात्र बनाउँदा यस्तो हुनेरैछ।
निकै दिनदेखि नै
बन्द हुन्छ रे भन्थे
तर खै त
पहाडले धेरै बेर छेक्न सकेन
कालो आकाशलाई च्यातेर
उज्यालोको किरण छरेर
घाम त उदाएरै छोड्यो।
बन्दले घामलाई छेक्न नसक्ने रैछ।
भन्नेहरूले त बन्द छ रे,
ननिक्लनु है भन्थे
तर खै त चराहरु त
चिरविर चिरविर गर्दे
चारो खोज्न उडेरै छोडे
बन्दले भोको पेटको उडानलाई
रोक्न नसक्ने रहेछ।
November 08, 2013 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
केही समयअघिको एउटा रमाइलो प्रसंग छ। एक जना मित्र घरको खोजीमा भौँतारएि। त्यस क्रममा उनले निकै घर हेरे पनि। त्यही क्रममा एउटा घर हेर्न उनीसँग म पनि पुगेको थिएँ। धापाखेलको नयाँबस्तीमा बनेको त्यो घर ललितपुरतिरका शाक्यजीले बनाएका रहेछन्। घर देखाउने क्रममा उनले निष्कपटता र सरलताको अचेल हतपती देख्न नपाइने उदाहरण पनि देखाए। त्यो अनुभव मेरा लागि निकै सुखद रह्यो।
October 28, 2013 कान्तिपुर कोसेली, नेपाली, प्रकाशित No comments
पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार
यसपटकको दशैं दिल्लीमा बित्यो । गएको अक्टोवर ६ देखि १५ सम्म म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा थिएँ । म राजनीतिसंग गोरु बेचेको नाता पनि नभएको मान्छे भएर मात्र हो, नत्र चुनावको हल्लाको बेला दिल्ली भ्रमणको अर्कै अर्थ लाग्थ्यो होला । म त उपचारको लागि गएको थिएँ । हुन त राजनैतिक तीर्थयात्रा, दर्शन र आशीर्वादका लागि जाने हाम्रा नेताहरु पनि भन्नेबेला त उपचारै भनेर जाने गर्छन् क्यारे । तर म भने रहरले भन्दा पनि बढी बाध्यताले उता हान्निएको थिएँ । पछिल्लो नौ महीनादेखि कहिले अलि कम र कहिले बढी दुखेर मलाई सताइरहेको घुँडाको उपचारका लागि ।
अक्टोबर ६, २०१३
त्रिभुवन विमानस्थलमा दिल्ली जानका लागि हवाइजहाज चढ्न कुर्नेहरुमा अधिकांश नेपालीहरु देखिए । तिनमा पनि अधिकांश स्वास्थ्य उपचारका लागि नै जानेहरु हुँदा रहेछन् । दुई नेपाली परिवारको बीचमा बडो रमाइलो सम्वाद सुन्न पाइयो,
ए... कुन अस्पताल ?
मानौं उपचारका लागि नै दिल्ली जाने हो भन्ने कुरा स्थापित सत्य हो । अकिकति जटिल समस्या हुनासाथै हामी दिल्ली नै जानु पर्ने हाम्रो नियति देखेर नरमाइलो लाग्यो । म जस्तै ती अरु मानिसहरु पनि रहरले नभै वाध्यताले दिल्ली जान लागेका थिए होलान् ।
मैले काठमाण्डौबाट नै अपोलो र मेदान्तमा इमेल गरेको थिएँ । आफ्नो समस्या, नाम, उमेर, लिंग सबै कुरा खुलाएर । अनि यहाँका रिपोर्टहरुले भनेका कुराहरु पनि टाँसिदिएको थिएँ । दुबै ठाउँबाट त्यसको जवाफ आएको थियो । मेदान्तका मानिसले मलाई डियर म्याडम भनेर सम्वोधन गरेका थिए । अनि बाह्र वर्ष रामायण पढायो, सीता कसकी जोई भने झैं तपाईंको समस्या विस्तृत रुपमा लेखेर पठाउनुहोला भन्ने अनुरोध पनि थियो । त्यसैले मैले मेदान्तको नाम हटाइदिएँ । जहाँका मानिसले मेरो सबै वर्णन भएको इमेल हेरेर मलाई म्याडम भन्छन्, अनि समस्या के हो भनेर सोध्छन्, तिनकहाँ उपचार गराउन मलाई ईच्छा नै लागेन ।
तसर्थ मेरो गन्तव्य सरिता बिहार स्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो थियो । त्यहाँकी रेखा नायर नामक सम्पर्क अधिकृतसंग फोनमा पनि कुराकानी भैसकेको थियो । उनले त्यसै दिनका लागि अर्थोपेडिक डाक्टरसंग समय मिलाइदिएको र बस्नका लागि पनि अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सेवा सदन भन्ने ठाउँमा बन्दोवस्त भएको बताएकी थिइन् । नभन्दै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानघाटमा अपोलो अस्पतालका मान्छे हामीलाई लिन आएका थिए । उनी नेपाली नै रहेछन् । तर अचम्मको कुरा के भने आफूलाई पोखराको भन्ने तिनलाई नेपाली भाषामा चाहिँ कुरा गर्न चैं आउँदैन रे । उनका साथमा अरु दुइ जना गैर नेपालीहरु पनि थिए । उनले हामीलाई निकै बेर कुराएपछि मैले रेखा नायरसंग कुरा गर्न चाहें । उनले आफ्नो मोबाइलमा सम्पर्क गराए । लौ जा, अब रेखा नायरले डाक्टरसंग भोलिपल्ट मात्र समय भएकोले त्यस दिन होटलमा जान भनिन् । ती नेपाली कर्मचारीले सेवासदनमा कोठा नभएकोले अर्कै कुनै होटलमा लैजान भनेर बल्लबल्ल एउटा भाडाको गाडी मिलाएर हामीलाई चढाए । अनि आफू पछि उतै आउँछु भनेर आफ्ना साथीहरुसंग अर्को गाडी चढे । मसंग मेरा दुइ छोरीहरु पनि थिए । सिआइडी र क्राइम पेट्रोल हेरेर तर्सिएको दिमाग न पर्‍यो, मैले ड्राइभरलाई सेवा सदन नै लैजान भनें ।
सेवा सदन अधिकांश उपचारार्थ आउने नेपालीहरुले नै भरिएको हुँदोरहेछ । सफा, सुग्घर र सस्तो हुनाले कोठा पाउन चाहिँ गाह्रो । नाम लेखायो भने पनि दुइतीन दिन पछि पालो आउन सक्ने । उपचारका लागि अपोलो आएका बाहेक अरुलाई चाहिँ बस्न दिंदैनरहेछन् त्यहाँ । जाँडरक्सी वा मापसे त पूर्ण रुपले वर्जित । हामीले साँच्चै त्यहाँ त्यसदिन बास पाएनौं । रेखाले खै किन हो त्यहाँ केही भनेकी नै थिइन रहेछ । वेटिंग लिष्टमा नाम लेखाएर उनीहरुले नै सुझाएको अर्को होटल तिर लाग्यौं । त्यो चाहिँ अपोलोबाट २ किमी जति टाढा रहेछ । सेवा सदनमै गाडी लिएर लिन आए । होटलबाट अस्पताल पनि बिहान उनीहरुले नै पुर्‍याइदिने रे । शुल्क चाहिँ सेवा सदन भन्दा निकै बढी । यस्तो बेलाका लागि उनीहरुकै भाषामा एउटा भनाइ छ नि,
काम केही नभएकोले साँझ इण्डिया गेट तिर बरालिएपछि मैले दिल्लीमा बस्ने मेरी मित्र पमी सिंहलाई फोन गरें । कलेजमा संगै पढेका हामी लामो अवधिपछि फेसबुकले भेटाएर नजीक भएका थियौं । बेलुका उनले बोलाएको होटल ताजमहलमा हामी भेट्यौं । खानपीन पछि उनको घरमा बस्न जाने आग्रहलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकारेर हामी छुट्टियौं । उनैले हामीलाई हाम्रो गुँडसम्म पुर्‍याइदिइन् ।
अक्टोबर ७, २०१३
“बेटा, ये कहाँ से लिया तुम नें ?”
अनुहारभरी हजारौं चाउरीका मुजाहरु थिए ती बृद्ध महिलाका । सिन्का जस्ती थिइन् उनी । पहिले त मैले उनले के भनेकी हुन् भनेर बुझिनं तर उनका उदास आँखाहरु मैले टेकेका बैशाखीहरुमा गडेका देखे पछि उनले तिनै बैशाखीका बारेमा सोधेकी हुन् भनेर बुझें ।
बिहान पाँच बजे उठ्नासाथै चिया खानु पर्ने बानीको तलतलले म चायवाला ठेला खोज्न निस्केको थिएँ । उताबाट आइरहेकी ती बृद्धा भेटिएकी थिइन् ।
मैले उनलाई त्यो बैशाखी नेपालबाटै लिएर आएको कुरा बताएँ । उनले लामो सास फेरेरे भनिन्,
“मेरो छोरोको दुर्घटनामा परेर खुट्टा नराम्ररी भाँचिएको छ । उसलाई पनि यस्तै चाहिन्छ भनेका छन् । धेरै महँगो हुँदो रहेछ । मेरो औकातले किन्न भ्याउँदैन ।”
मेरो मन अमीलो भयो । तर मैले सहानुभूति भन्दा बढी उनलाई केही दिन सकिनं ।
“कोइ बात नहीं बेटा ।”
उनी आफ्नो बाटो लागिन् । त्यतिबेला मलाई भोलिपल्ट डाक्टर जँचाएर दुइ चक्की ओखती खानासाथ मेरो नौ महीनाको दुखाई चटक गरे जसरी बिसेक हुन्छ भन्ने कुरा के थाहा । त्यसको अलिकति पनि पूर्वानुमान भएको भए म त्यो बैशाखी उनलाई दिएर पठाउँथे ।
त्यस दिन बिहान नौ बजे फोन गर्दा छिनछिनमा फरकफरक कुरा गर्ने रेखा नायरको चालादेखि वाक्क भइयो । अब आफ्नै सुरमा लाग्नु पर्ला भनेर अस्पताल गयौं । अपोलोमा विदेशी विरामीहरु पनि निकै नै आएका हुँदा रहेछन् । विशेष गरी नाइजेरियाका विरामीहरु । कतिसम्म त भने उनीहरुले एउटा नाइजेरियनलाई त जागीरै दिएर राखेका रहेछन् ।
म खुरुक्क नाम दर्ता गरेर डाक्टर भेट्न गएँ । डाक्टर टण्डन भन्ने वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ मेरो भागमा परेका थिए । वा उनको भागमा म परेको थिएँ । अपेक्षित नै थियो, उनले सबै कुरा सुनेर एमआरआइ, पिसाब र रगतका टेष्टहरु गरेर भेट्न आउन भने । अनि तीन दिनका लागि भनेर बिहानबेलुका खान एउटा ओखति लेखिदिए । मैले उनलाई के त्यो एण्टी इन्फ्लेमेटरी ओखती हो भनेर सोधें । उनले समर्थन जनाए पछि मैले भनें, “मैले काठमाण्डौमा थुप्रै त्यस्ता ओखति खाइसकें र केही पनि फरक पर्दैन त्यसले ।”
उनले मुसुमुसु हाँस्दै भने, “एकपटक यो पनि खाएर हेर्नुस् न । थोरै मात्राको लेख्द्या छु ।”
एमआरआइको लागि त्यस दिन समय मिलेन । कि त कोही समय लिएर आएनन् भने घुसौंला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने भो, कि अर्को दिन । हामी नकुर्ने भयौं । डाक्टर टण्डनले दिएको ओखति भने मैले किनेर खाएँ । त्यसको एक घण्टामै चमत्कार गरे सरह मेरो घुँडो दुख्न छोड्यो । म नौ महीनामा पहिलोपटक बिना पीडा आरामले हिंड्न थालेको थिएँ । कस्तो अचम्म । अनि हामीले आगरा र जयपुर बरालिने निर्णय ग¥यौं । कनट सर्कलमा एउटा पहिले चिनेको ट्राभल एजेन्सी खोज्न हिंडेको, मरे भेटिएन । पन्ध्र वर्ष अघिको कुरा थियो, के थाहा बन्द नै भैसकेको पो हो कि ? एउटा अर्को एजेन्सीसंग कुरा मिलाइयो । उसले एउटा गाडी र त्यहाँ लोकल गाइडहरु पनि उपलव्ध गराउने भयो । ड्राइभरलाई फर्केपछि स्वेच्छाले दिने टिप र खानपीन बाहेक अरु सबै खर्चको एकमुष्ट हिसाब भयो । आगरा र जयपुरमा एकएक रात चार देखि पाँच तारे होटलमा राख्ने बन्दोवस्त पनि त्यसमा थियो । उसले गाडी पनि देखायो, राम्रो थियो । भोलिपल्ट हामीलाई टिप्ने ठाउँ बताएर हामी फेरि होटल फक्र्यौं ।
बिहान भनेको समय भन्दा ढीला गरेर गाडी आयो । उही कम्पनीको उही मोडल भए पनि देखाएको भन्दा अलि थोत्रो थियो त्यो गाडी । यस्ता सानातिना कुराहरुमा चाहिँ तलमाथि गर्ने उताकाहरुको पुरानै बानी हुन्छ । हुन त पाएसम्म उताकाहरुलाई पनि यता आएको बेला लटरपटर पार्ने त दुइ देशको गौरवशाली परम्परा नै हो । डाक्टर टण्डनलाई पनि नेपनल आएको बेला मनकामना घुमाउने बेला यहाँको कुनै एजेन्सीले राम्रैसंग ‘चुना’ लगाएको थियो रे भन्दैथे ।
नयाँ बनेको यमुना एक्सप्रेस हाइवेबाट गएको भए १६५ किलोमिटरको बाटो दुइ तीन घण्टामा पुगिने आगरा हामीलाई मथुरा र कृष्ण भगवान जन्मेको स्थान देखाउने भन्दै पुरानो बाटोबाट लगेका कारण पाँच घण्टा बढी लाग्यो । शशि पाल नाम गरेको ड्राइभर चाहिँ ज्ञानी मान्छे थियो । म उससंग कुराकानी गर्दै बाटो कटाउन थालें । आगरामा हामीलाई गाइड कुरिरहेको थियो । टेप रेकर्डर चलेको जसरी घोकेका कुराहरु सुनाउँदै उसले हामीलाई पहिले लालकिला घुमायो । हामी थाकेका थियौं । ताजमहल जानु अघि होटलमा गएर नुहाइधुवाइ गर्न भ्याइन्छ कि भन्ने जिज्ञासामा उसले ढुक्क हुँदै भन्यो, “साढे ६ बजेसम्म ताजमहलको ढोका खुल्छ । चिन्ता नै नगर्नुस् ।”
तर जब हामी त्यहाँ ६ बजे पुग्यौं, थाहा भयो, टिकट बिक्री साढे ५ बजे नै बन्द हुने रहेछ । गाइडले घैंटे हान्यो, “टिकट बिक्रीको समय दिनदिनै फरक हुन्छ । हिजोसम्म साढे ६ थियो ।”
मैले उसको हूर्मत लिएँ, “हामीलाई घाँस खाने भन्ठान्या ? थाहा थिएन, झुक्किएँ भने भै हाल्यो नि । किन गफ लगाउनू ?”
उसले ङिच्च हाँस्दै खीस निपोर्‍यो । उनीहरुको भाषामा त्यसलाई खीसें निपोरना भन्छन् ।
अक्टोबर ९, २०१३
भोलिपल्ट बिहान सखारै हामी ताज महल पुग्यौं । थोत्रो टेपरेकर्डर फेरि चल्न थाल्यो । मुमताज महलको बारेमा उसले भन्यो, “ह्वेन शी वाज डाइड, शी क्लोज्ड हर आइज फाँर एभर एण्ड शी वाज वान्ली थर्टी टू ।”
एक हिसाबले राम्रै भयो । ताजमहल कि त बिहान सूर्योदयमा कि सूर्यास्तमा हेर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । धेरै वर्ष पहिले ताजमहल मध्यान्हमा हेरिएको थियो । यसपटक बिहानीका किरणहरुले ताजमहल चुमेको दृश्य हेर्दा साँच्चै अनुपम नै पो हुँदोरहेछ । त्यसपछि ताजमहल र आगरासंग विदा माग्दै जयपुर तिर लागियो । हामी हिंड्ने बेला गाइड कानदेखि कानसम्म ङिच्च हाँस्दै कपाल कन्याउन थाल्यो, “सर आइ एक्सपैक्ट साँम टिप ।”
मेरा त कन्सिरीका रौं ठाडा भए । यति तोर्पे थियो त्यो गाइड, जसलाई ताजमहलको ढोका कतिबजे बन्द हुन्छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । मैले उसको सबै कुरा ट्राभल एजेन्सीसंगै मिलाइसकेको छ भनेर कन्चीदाम झारिनं । टिप भनेको उसको कामबाट सन्तुष्ट भए पो दिने कुरा हो ।
त्यहाँबाट हिंडेपछि हाम्रो ड्राइभर त चुइँक्क बोल्नै छाड्यो । कालो मुख लगाएर गाडी हाँकिरह्यो । मैले कुरो बुझिहालें । दिल्लीको गाइडलाई सुक्को नझारेको हुनाले उ निराश भएको हुनुपर्छ । कस्तो मख्खीचूसको फेला परियो भनेर उसको मूड खराब भएको हुनुपर्छ । उसको टिप बाहेक अरु सबै कुरा एजेन्सीलाई दिएको छ भन्ने कुरा मैले उसलाई सुनाएँ । अचानक उसको अनुहार फेरि उज्यालो भयो र बाटोभरी उसले ट्राभल एजेन्सीको मालिकको कुरा काट्यो । कसरी थोरै पैसामा धेरै दलाउँछ भनेर मनभरीका भडास निकाल्यो उसले ।
“मेरो टिप पनि उसैले हिसाबमा नहालेको राम्रो भयो । नत्र उसले तपाईंसंग लिएकोमध्ये आधाको आधा पनि मलाई दिन्न्थ्यो । के गर्नुू, ड्राइभरहरुको कम्पिटिसन छ, मैले केही भने कि अर्को मान्छे पाइहाल्छ । तपाईं आफै विचार गर्नुस् यो महँगो सहरमा तीन हजारको तलबले म कसरी बाँच्छु होला ।”
उसले मलाई चनाको झ्याङमा चढाउन खोज्दै सोध्यो, “तपाईंको आफ्नो सहरमा त बिएमडब्ल्यू गाडी छ होला हगि सर ?”
म केही बोलिनं, नसुनेझैं गरेर टारें ।
जयपुरको गाइड चाहिँ अलि गतिलो थियो । इतिहासमा एमएसम्म पढेको जेके सिंह नामक त्यो गाइडले हामीलाई त्यस साँझ निकै रमाइलोसंग त्यहाँको प्रख्यात हवा महल, मानसिंह सवाइले बनाएको अमेर किल्ला र जलमहल आदि घुमायो । जयपुरको सुन्दरता र भव्यताले वास्तवमै मन्त्रमुग्ध बनायो । अमेर किल्ला भएको पहाडको वरिपरि मानसिंहले आफ्नो सुरक्षाका लागि विशाल पर्खाल बनाएका रहेछन् । गाइडले छाति फुलाउँदै भन्यो, “दिस इज द ग्रेट वाल अफ जाप्पुर ।”
त्यहाँका स्थानीयहरु जयपुरलाई जाप्पुर भन्दा रहेछन् ।
साँझ उसैको सल्लाहमा राजस्थानी लोकगीतका साथ स्थानीय खाना खाने एउटा रेष्टूराँमा गएर खाइयो । गायक स्थानीय गीतहरु गाउँदै थिए । मैले केसरिया बालम भन्ने राजस्थानको लोकगीत फर्माइस गरें, जसलाई उनले बडो मीठोसंग सुनाए । त्यहाँको प्रख्यात लोकगीत त्यहींको वातावरणमा सुन्नुको आनन्द नै अर्कै थियो । हाम्रो गाइडलाई बरु केसरिया बालमको कथा थाहा रहेनछ । मैले अलिअलि सम्झेको भरमा र अलिअलि फुलबुट्टा भरेर उसलाई त्यो सुनाइदिएँ ।
बाल्यकालमा आगोले पोलेर अनुहारको एउटा भाग बिग्रेकी गरीव परिवारकी रुक्मी अत्यन्तै सुन्दर युवती हुन्छे । तर ऊ आफ्नो अनुहारको जलेको भाग सँधै घुम्टो भित्र लुकाउँछे । सम्पन्न परिवारको एउटा चित्रकार रनवीरले कल्पनाको भरमा बनाएको सुन्दर युवतीको चित्र ठ्याक्कै रुक्मी जस्तो छ । एक दिन उसले रुक्मीलाई देख्छ र अचम्म पर्छ । ऊ रुक्मीलाई मन पराउन थाल्छ र उनीहरुको बिहे हुन्छ । बिहे अघि रुक्मीले आफ्नो वास्तविकता बताएर लेखेको पत्र कसैले रनवीरको हात पर्न दिएको हुन्न । सुहागरातमा उसको जलेको अनुहार देखेपछि रनवीर आफूमाथि धोका भएको ठान्छ । यसैको सेरोफेरोको यो कथा सुनेर गाइड पनि दंग प¥यो ।
त्यहाँबाट होटल फर्कने बेला रात परिसकेको थियो । एउटा चोकमा ट्राफिकले हाम्रो गाडी रोक्यो । ड्राइभरले हाइ बीम बालेको रहेछ । जयपुर सहरमा राती हाइबीम बालेर गाडी चलाउन नपाइने रहेछ । हामीकहाँ त हाइबीमको त कुरै छोडौं, एउटा साइडको बत्ती नबल्ने पनि आरामसंग चलाउन पाइन्छ । उसले ड्राइभरलाई ओराल्यो । उनीहरुको बीचमा लेनदेनको मोलमोलाइ हुन थाल्यो । एकै छिनपछि आएर शशि पालले खुइय गर्दै भन्यो, ”दो सौ रुपये खा गया ।”
उसको गल्तीले त्यो पैसा गयो भन्दा उसलाई नोक्सानी हुन्छ रे । त्यसैले उसले योजना बनायो, “म एजेन्सीको मालिकलाई ड्राइभरको यूनिफर्म र नामपातो नभएको भनेर तिरायो भन्छु । तपाईंलाई सोध्यो भने हो भन्दिनुहोला है सर ?”
मैले हुन्छ भनें । बिचरा होटलको पैसा बचाउनका लागि रातभरि गाडीमै सुत्दोरहेछ भन्ने मैले थाहा पाइसकेको थिएँ । एजेन्सीको मालिक भनाउँदो मानिस चाहिँ बेस्मारी रगत चुसेर पट्ट फुट्न लाग्या लामखुट्टे जस्तो थियो । अनुहारका कणकणमा फट्याँइ प्रष्टै देख्न सकिने ।
बिहानै जयपुरका पूर्वराजाको दरवार घुमेर सकाएपछि हामी दिल्ली फक्र्यौं । हामी काठमाण्डौका एक जना परिचितले सुझाएर पठाएको करोल बागको एउटा होटलमा बास बस्यौं । यत्रो दौडधूप गर्दा पनि मेरो घुँडा पटक्कै दुखेको थिएन । नौ महीनामा बल्ल दुखाइ मुक्त हुनुको आनन्द म बयानै गर्न सक्दिनथें । त्यो दुइ चक्की औषधि र त्यो दिने डाक्टर टण्डनलाई मैले धेरै पटक मनमनै साधुवाद भनें । भोलिपल्ट अपोलो गएर एमआरआइ र अरु टेष्टहरु गर्ने निधो भयो ।
अक्टोबर ११, २०१३
बिहानै देखि घनघोर मेघ गर्जनका साथ ठूलो पानी पर्‍यो । आफ्नो पुरानो बानी अनुसार बिहान झिसमिसेमा म फेरि त्यहाँको चोकमा चायवाला ठेला खोज्न निस्कें । होटलबाट अलि पर मूल सडकमा एउटा बूढा मान्छे तात्तातो चिया बनाइरहेको थियो । दिल्ली पुलीसको एउटा जीप रोकिएको थियो र एक जना भूँडे मोटे सब इन्सपेक्टर चिया खाँदै थियो । मैले पनि चिया मागें । सब इन्सपेक्टरले आफूले चिया खाइसकेर जीपमा भएको केतलीमा पनि चार पाँच कप चिया भर्न लगायो र गयो । भनिरहनु नपर्ला, न बूढाले पैसा माग्यो, न उसले नै दियो ।
मैले चिया खाइसकेर खल्तीमा हात घुसारें । लौ जा, मसंग त भारु रहेनछ । अब के गर्नु ? मैले अप्ठ्यारो मानेर उसलाई त्यो कुरा भनें । नजीकैको आफू बसेको होटलको नाम पनि लिएँ । उसले निस्फिक्री भएर भन्यो, “कोइ बात नहीं साहब । बाद में आ कर दे देना ।”
म उधारो चिया खाएर होटल फर्कें । पानी झन्झन् दर्कन थाल्यो, बेस्मारी मेघ गर्जिरहेको थियो । त्यस दिनका लागि सब काम थाँती राखेर दिन होटलमै बिताइयो । बंगालको खाडी माथि झण्डै आधा भारतको आकारको आँधीका कारण मौसम अप्रत्यासित रुपमा खराब भएको हुनाले दिल्लीमा बेमौसमी पानी पर्न थालेको थियो । त्यही आँधी सरेर नेपाल तिर छिरेका कारण यहाँ हिले दशैं भएको थियो । त्यस दिन साँझ पमीले आफ्नो घरमा खाना खान बोलाएकी थिइन् । हामी करोलवागबाट मेट्रो चढेर कनटप्लेसको राजीव चोकमा र त्यहाँबाट फेरि सेक्रेटरियाटमा स्टेसन बदल्दै जंगपूरा अवस्थित उनको घर गयौं ।
दिल्लीको मेट्रो मैले कल्पना गरेको भन्दा राम्रो थियो । अरु कुरामा जे भए पनि त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चिटिक्कै पारेर राखेका रहेछन् । चढ्ने ओर्लने ठाममा घच्चमघच्चा गर्ने बानी छोड्न नसके पनि अरु कुरामा भने मेट्रो राम्रो थियो । त्यसमा र त्यसको स्टेसनमा थुक्नेहरुलाई सीधै २०० रुप्याँ जरिवाना हुने कारणले होला, भारत भ्रमणमा जतात्यतै देखिने पानका थुकहरु देखिएनन् मेट्रोमा । हामीले यहाँ पनि जथाभावी थुक्नेहरुलाई जरिवाना गर्ने हो भने त थुप्रै रावश्व उठ्छ होला । मेट्रोमा जति नै भीड र धक्कामुक्की भए पनि मेरो बैसाखी देख्नासाथ मानिसहरू सीट खालि गराएर बस्न दिइहाल्थे । यो कुरामा उनीहरू सभ्य र सुसंस्कृत रहेछन् । आरामले बस्न पाउँदा रमाइलो लागे पनि सिटमा 'केवल विकलाङ्गों के लिये' लेखेको देख्दा नरमाइलो लाग्थ्यो । एउटै कुराले पनि रमाइलो र नरमाइलो दुबै हुन सक्दोरहेछ कहिलेकहीं ।
पमीका पति इन्दरजीत सिंह, छोरी गुञ्जन र छोरा अभिराजले हामीलाई प्रदान गरेको आत्मीयताको बयान गर्ने कुनै शव्द नै छैन । हुँदाहुँदा पढ्नका लागि लण्डनमा बसेकी उनकी अर्की छोरी तेजल पनि स्काइपमा हामीसंग अत्यन्त नजीक हुन पुगिन्, एकदमै छोटो समयमा । उनीहरुको आतिथ्यले गर्दा विरानो सहर पनि अचानक आफ्नै घर जस्तो पो लाग्न थाल्यो ।
हामीलाई पनि त्यहीं राख्न कर गरिरहेका थिए उनीहरु । तर मेरो अस्पतालका कागजहरु सबै होटलमा भएका कारण हामी होटल जानै पथ्र्यो । भोलिपल्ट अस्पतालमा दिन बित्ने हुनाले पमीले हाम्रा छोरीहरुलाई भने उनकै घरमा राखिन् ।
“यिनीहरुको जिम्मा मेरो ।”
पमी र इन्दरजीत आधा रातमा हामीलाई होटल पुर्‍याउन आए । त्यतिमात्र हैन पमीले भोलिपल्ट अस्पतालबाट फर्केर होटल जान नपाइने र उनकै घरमा बस्नु पर्ने उर्दी पनि बडो स्नेहका साथ सुनाइन् । त्यति धेरै आत्मीयतालाई नकार्न सकिने सम्भावना नै रहेन । पैसा जसले पनि कमाउन सक्छ, तर धनी त्यो हो जसले सम्वन्धहरु कमाएको हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता अझै बलियो भयो । अचम्मको कुरा त के भने, इन्दरजीत बच्चुकैलाशका फ्यान रहेछन् । गीतसङ्गीतका पारखी र शौखिन पनि । बच्चुकैलाशको टाढाटाढा जानु छ साथी भन्ने गीत त आफ्नो गाडीमा हरदम बजाउने गर्दा रहेछन् । उनी भन्दै थिए,
“मैले यति ओजपूर्ण, मीठो र सधिएको स्वर कि मन्ना डेको सुन्या छु कि बच्चुकैलाशको ।”
बच्चुकैलाशले गाउन छोडेको धेरै भयो भन्ने कुरा मैले सुनाएँ । खिन्न भएर उनले भने,
“तपाईंले उनलाई भेट्नु भो भने त्यसो नगर्न भन्नुहोला । बच्चुकैलाशले यदि एउटा मात्र हिन्दी गीत गाए भने पनि पूरै भारत पिटेर खान्छन् । उनी चाहन्छन् भने म उनको हिन्दी गीत रेकर्डिंगको सम्पूणै जिम्मेवारी लिन तयार छु ।”
त्यसो भयो भने क्या रमाइलो होला भन्ने सोच्दासोच्दै मैले सम्झें, बच्चुकैलाश कति जिद्दी छन् । उनले अब आएर, त्यो पनि हिन्दी गीत त गाएको गायै भयो ।
मैले आफूसंग भएका बच्चुकैलाशका सबै गीतहरु उनलाई पठाइदिने वाचा गरें । उनको आँखामा मन पर्ने खेलौना पाइने कुरा सुनेर आउने जस्तो वालसुलभ चमक आयो ।
अक्टोबर १२, २०१३
बिहानै मेट्रो चढेर अपोलो गइयो । चार घण्टा कुरेर एमआरआइ र ब्लड टेष्टको लागि दिएर हामी फक्यौं । रिपोर्ट भोलिपल्ट मात्र पाइने भयो ।
अक्टोबर १३, २०१३
दिन पमीको परिवारले लगाएको तिर्नै नसक्ने गुनहरुका साथ बिते । स्कूलमा संगै पढेका साथी इरफान खान पनि नयाँ दिल्लीमा नै बस्छन् भन्ने थाहा थियो । म त्यता जाने कुरा थाहा पाएर उनले मलाई फेसबुकमा आफ्नो नम्बर दिएका थिए । हाम्रो सम्पर्क भयो । उनी पनि जंगपुरा नै आए मलाई भेट्न । त्यसदिन पमीको परिवारसंगै हामी कुतुब मीनार हेर्न गयौं । इरफानले हँसाए, “एउटा कुरा थाहा छ ? म दिल्ली बसेको २५ वर्ष भैसक्यो । आज म पहिलो पटक कुतुब मीनार देख्दैछु ।”
अक्टोबर १४, २०१३
एमआरआइ र टेष्टका अरु परिणामहरु आएपछि डाक्टर टण्डनले भने,
“मेरो विचारमा अब हामीले फेरि भेट्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।”
मलाई दुख्न छोडेको केही दिन भैसकेको थियो । तर मलाई अझै अचम्म लागिरहेको थियो । नौ महीनाको मेरो यो किचकिचे पीडा के जम्मा ६५ रुप्याँको ओखतिको भरमा नै ठीक हुने रहेछ ? म अझै पनि यसलाई कुन रुपमा व्याख्या गर्ने भन्न सक्दिनं ।
अक्टोबर १५, २०१३
काठमाण्डौ फर्कने दिन । पमीले एयरपोर्टसम्म पु¥याउने बन्दोवस्त गरिन् । हामीले १००० र ५०० का भारु बिर्सेका थियौं । नेपालमा ती नोटहरु प्रतिवन्धित छन् । जम्माजम्मी दश हजार जतिका ती नोट बाँकी रहेका थिए । त्यहाँका एयरलाइन्सका मानिसहरुले त्यो थाहा पाउनासाथ भित्र सुरक्षा जाँचसम्म त्यसको सुइँको दिने चलन हुँदो रहेछ । अनि त्यहाँका कुनै बैंकका काउण्टरले पनि ती नोटहरु नसाटिदिंदा रहेछन् । यो मिलीमतोको दह्रो नेटवर्क रहेछ । मैले पमीलाई फोन गरें । नेरु साट्न नमिलेको कुरा बाताएर ड्राइभर बाटैमा छ भने फर्काउन अनुरोध गरें । बरु म ती नोटहरु उसकहाँ फर्काउँछु, विमानस्थलका कर्मचारीहरुलाई किन खुवाउनु । तर हामी भित्र छिर्ने बेलासम्म पनि उनको ड्राइभर आउन भ्याएनन् । पमीलाई फोन गरेर बेकारमा दुख धयो, भैगो अब म भित्र जानु पर्ने भयो भनेर जानकारी गराएँ । दिमागमा एउटा आइडिया फु¥यो । कुनै पसलमा गएर चीसो, कुनैमा स्याण्डवीच, कुनैमा कफी, कुनैमा पुस्तकहरु किन्दै हजारका नोटहरुको खुद्रा गर्न थाल्यौं ।
सुरक्षा जाँच काटेर हवाइजहाज भित्र बसेर सीट बेल्ट बाँधिसकेको थिएँ, एक जना कर्मचारी मेरो नाम लिंदै मलाई खोज्न आए ।
“तपाईं एकपटक प्लेनको ढोकासम्म आउनुस् न ।”
म जिल्ल पर्दै उसको साथ लागेर गएँ । एयरपोर्ट सुरक्षाका एक जान मान्छे त्यहाँ एउटा खाम लिएर उभिएका थिए,
“मिसेज सिहंले पठाउनुभएको, तपाईंलाई दिनु भनेर ।”
आएर खोलेर हेर्छु त खाममा त सोह्र हजार नेरु पो छ । फोनमा पमीले कुरा राम्ररी बुझिनछिन् । उनले भन्ठानिछन्, मलाई दश हजार भारु को नेपाली रुपियाँको आवश्यकता परेको हो । त्यति कम समयमा नेरु खोजेर कसकसलाई सोर्स लगाएर उड्ने बेला हुन लागेको हवाइजहाजसम्मै उनले त्यो पु¥याइछिन् । पछि मैले भनें, “कसो प्लेन उड्न भ्याएको रहेनछ । तत्र तिमीले त्यसलाई फेरि फर्काएर ओराल्ने रहिछौ ।”
हामी हाँस्यौं ।
काठमाण्डौ आइपुग्दा पनि एउटै कुराले मन अलि खिन्न भैरहेको थियो । मलाई तिनै बूढी आमाको झझल्को आइरहेको थियो । मलाई अब आवश्यक नभएको त्यो बैशाखी उनको छोराका लागि दिन पाएको भए कति जाति हुन्थ्यो ।
एउटा भेडासंग फोनवार्ता
October 04, 2013 1 comment
सात महीना र तीन डक्टरको शरण पछि पनि ठीक नभएको घुँडोको उपचारका लागि केही दिनका लागि दिल्ली जानु पर्ने भयो । घरमा पालेको कुकुर जख्खूलाई हेर्ने मान्छे कोही नभएकोले कुनै राम्रो हेरचाह गर्ने केनेल क्लबमा राख्नु पर्ने भयो । एक जना परिचित दाइले जाउलाखेलको एउटा भेट क्लिनिकको नाम सुझाए । त्यहाँ गएर कुरा गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले प्रतिदिन रु ५०० लिएर जख्खूलाई राखिदिने कुरा गरे । बाँकी कुरा चाहिँ हाम्रो डाक्टरसाबसंगै गर्नुहोला, राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हैन अलि पर छ भन्ने जानकारी पनि दिए । ढुक्क भइयो र अरु तयारीमा लागियो । आइतबार आफू उड्नु पर्ने भएकोले शनिवार त जख्खूलाई त्यहाँ पु¥याउन पर्ने थियो । त्यसैले डाक्टरसापलाई फोन गरियो । उनले फोन उठाएपछि भएको वार्तालाप यस प्रकार छ ।
(हकारेको र रुखो स्वरमा) हलो
(फोनलाई कानबाट टाढा लैजाँदै) डाक्टर फलानो बोल्नुभएको हो ?
(अझै ठूलो स्वरमा) हो के भो ?
(नम्र हुँदै) मलाई एकजना दाइले तपाईको रेफरेन्स दिनुभएको हो । केही दिनका लागि बाहिर जानु पर्ने छ र मेरो कुकुरलाई तपाईको केनल.......
(कुरा काट्दै अझै रुखै स्वरमा) दिनको हजार रुप्याँ लाग्छ । ल्याउने लौजाने तपाईंको काम ।
तर मैले तपाइंको अफीसमा गएर कुरा गर्दा त्यहाँको मान्छेले त ५०० भन्याथ्यो ।
त्यो अरु बेलाको कुरा हो । दशैंको बेलामा हजार रुप्याँ लाग्छ ।
डाक्टरसाप, मैले पहिले पनि एक पटक रोयल केनल क्लबमा राख्दा त अझ ४०० मात्र लिएको थियो ।
(हकार्दै) त्यहीं लगेर राख्न लैजानु नि त, मलाई किन फोन गरेको ?
अब मेरो पनि मगज तात्छ ।
(उनकै जस्तो स्वर र भोल्यूममा) सबैभन्दा पहिले तपाईं मान्छेसंग कुरा गर्ने तरिका सिक्नुस् । जनावरको संगत धेरै भएर तपाईं पनि जनावर बनिसक्नुभएको रहेछ ।
डाक्टरसाप मौन हुन्छन् । म फोन काट्छु । कुनै बेला एउटा प्रहसनमा महले भेटेरेनरी डाक्टरलाई छोटकरीमा भेडा भनेको सम्झना हुन्छ ।
हाँसको छोयला, मेरो बायाँ फन्को र सुधीर शर्माको पुस्तक प्रयोगशाला
एउटा नगाइएको गीत
आदरणीय भीम विरागले मेरो यो गीतको सङ्गीत कम्पोज गर्नु भएकोथ्यो । कसले गाउने भन्ने निधो नै हुन पाएन। भिम विराग बितेर जानु भयो । आज कम्प्यूटरमा पुराना फाइलहरू खोतल्ने क्रममा अचानक यो गीत फेला पर्‍यो । अनि सम्झनाका एउटा पाटो जीवन्त भयो । उहाँ बुध्दनगरमा बस्नुहुन्थ्यो, म पनि । भेटघाट भइ्हन्थ्यो । उहाँलाई खसीको पक्कु कवाफ खान मन पर्छ भन्ने थाहा भएपछि म कहिलेकहीं उहाँलाई निम्तो गर्थें । उहाँ स्वीकारे आइदिनिहुन्थ्यो र मलाई आभारी बनउनुहुन्थ्यो । उहाँ छोरीज्वाईँसंग बस्नुहुन्थ्यो । बेलाबेला मलाई पनि बोलाउनुहुन्थ्यो ।
म शान्तिनगर सरेपछि अलि पातलो भयो भेटघाट । त्यहाँ शनिवार भाग लगाएको खसीको मासु बेच्ने पसल थियो । मैले एकपटक उहाँलाई बोलाएको बेला कुरैकुरामा मेरा केही गीतहरू सुनाएँ । यो एउटा गीत उहाँले मागेर लैजानु भयो । केही दिन पछि फोन गरेर भन्नु भयो, "मैले तपाइँको गीत कम्पोज गरेको छु ।"
मेरा लागि त त्यो गज्जपको कुरो भैहाल्यो । केटाकेटीदेखि सुनेका लेखक सङ्गीतकारले त्यसो भन्नु मेरा लागि गर्वको कुरो थियो । मैले सोधें, "म कहिले सुन्न आऊँ ?" उहाँले समय दिनासाथ म गएँ । हार्मोनियममा आफ्ना औंलाहरू चलाउँदै उहाँले आफूले रचेको धुन सुनाउनु भएको हिजै मात्र हो जस्तो लाग्छ ।
तर त्यो गीत कसले गाउने वा कहिले गाउने भन्ने कुरा भएन । त्यत्तिकै रहेको त्यो नगाइएको गीत यस्तो छ:
सुन्ने कोही नभैदिंदा बोल्ने पनि लाटो हुन्छ
संगै बग्ने नदीको पनि दुइटा भिन्दै पाटो हुन्छ
उठाउने कोही नभएपछि ठेस लागि लडे पनि
कहीं पनि पुगिन्न रैछ एक्लै जति हिंडे पनि
साथै हिंड्ने एउटै गोरेटो पनि दोबाटो हुन्छ
नसकेपछि बुझ्न कसैले भावनाको मूल्य यहाँ
खन्याए पनि मुटु निचोरि पुग्दो रैछ र कहाँ
मोती भनेर साँचेको माया पनि माटो हुन्छ
यसपालि देशलाई भकुण्डोमा जिताउनका लागि ठूलै कसरत गरिएको हो । खेलाडीहरुले सकूज्नेल खेलेका नै हुन्, एन्फाले पनि पञ्चबली दिने, रंगशालाको नाग छोप्ने, पशुपतिनाथ भाक्ने जस्ता आफूले जाने जति सबै गरेकै हो । अपार्टमेण्ट र आजीवन भत्ता दिने भनेर लोभ्याएको सम्म पनि हो । हामी जनताले पनि पूर्ण रुपले ऐक्यवद्धता देखाएकै हौं । बिहानैदेखि लाममा कुरेर टिकट काटेकै हौं, खेल सुरु हुनु भन्दा घण्टौं अघिदेखि रंगशाला ढुकेकै हौं । टिकट नपाएर एन्फालाई मुर्दावाद भनेर नारा लगाउँदै घरमा गएर टिभीमा हेरेकै हौं अनि बत्ती निभायो भनेर बिजुली अड्डामा ढुंगामुढा समेत गरेकै हौं । तै पनि, जित्ला भन्ने लाग्दालाग्दै अन्ततः नेपाल हा¥यो । भकुण्डोमा हारेको हो । खेलमा एउटाले जित्छ, एउटा हार्छ । तर यसपटकको हारजीत किन यति ठूलो आशा र निराशाको विषय बन्यो ?
अफगानिस्तानसंग सेमी फाइनलमा हार्नु किन यति पीडादायी भयो ? भारतलाई जित्नासाथ हामीलाई किन लाग्यो, अब कुनै प्रतिस्पर्धा नै छैन र ट्रफी हाम्रै हो ? अनि किन त्यसो नहुनु अविश्वसनीय र पीडादायी भयो हामीलाई ? मलाई लाग्छ हामीले भकुण्डोको बहानामा अरु नै खेल हे¥यौं, अथवा हेर्न खोज्यौं । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायत अन्य सबै कुरामा लामो समयदेखि हामीले भोगेका चरम निराशा, छटपटी र उकुसमुकुसको समग्रमा एकमुष्ठ समाधानको रुपमा खेललाई हे¥यौं । बबुरा खेल र खेलाडीहरुको काँधमा अनावश्यक र थेग्नै नसक्ने सपनाका भारीहरु बोकायौं । तिनले त्यो थेग्न सकेनन्, थचक्क बसे भनेर आक्रोशित भयौं । दोष कसको ?
हो हामीलाई हर्षित हुन मन लागेको छ । निकै भयो भित्रैदेखि खुसी हुन नपाएको र निकै बाँकी छ जस्तो लाग्छ हामीलाई प्रफुल्ल हुनका लागि । त्यस्तोमा हाम्रा लागि दक्षिण एसियाली स्तरको उपाधि जित्ने कल्पना रोमाञ्चक लाग्नु अस्वाभाविक हैन । विजयले हामीलाई हामीले चाहेको उल्लास प्रदान गथ्र्यो । तर हामीले त सारा कुरा त्यहीं लगेर जोड्यौं । मानौं त्यो पेनाल्टी छिरेको भए दलहरु सहमतिमा आउँथे, भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो, व्यापारीले कर छल्न छोड्थे, कर्मचारीले घूस खाँदैनथे, सम्विधान बन्थ्यो, डलरको भाउ घट्थ्यो, भारतले बुद्ध यता जन्म्या भन्न छोड्थ्यो, धारामा पानी आउँथ्यो, लोडसेडिग हुन्नथ्यो, बाटोका खाल्डाहरु पुरन्थिे । सबै नहुने भयो अब । परेन आपत ? के हाम्रा सारा समस्याको समाधानलाई भकुण्डोसंग जोडेर खुसी हुन चाहनु जायज कुरा थियो ? त्यही अतिआशावादले हामी हार्दा बढी आक्रान्त भएका हैनौं र ?
अरबौं रुप्याँ कमाउने मेस्सी जस्ता भकुण्डोका जादूगरले पनि हान्या जति सबै पेनाल्टी गोल भएको छैन । बिचरा रोहित चन्द, के गोल गर्दिन भनेर हानेका हुन् र उनले ? ओलिभर काह्न र क्यासियस जस्ता किपरले पनि नपत्याउँदो बल फुत्काएका छन् । के किरण चेमजोंगले जानीजानी गोल छिर्न दिएका हुन् र ? तरै पनि विशेष गरी यी दुइ खेलाडीप्रति मानिसहरु आक्रोशित भए, यिनको थाप्लोमा हारको जिम्मेवारी हाल्न खोजे । समग्र समस्याबाट आफूले खोजेको क्षणिक मुक्ति नपाएकोमा उनीहरुलाई दोष दिनु पटक्कै युक्तिसंगत कुरा हैन । संसारमा कुनै मानिसले, कुनै पनि काममा शतप्रतिशत सफलताको कुनै कीर्तिमान राखेको उदाहरण छैन । हाम्रा खेलाडीहरु पनि मानिस नै हुन्, हामी जस्तै मानिस । सुपरम्यान व्याटम्यान वा चलचित्रका तिलस्मी नायक हैनन् ।
हामीले पहिलेको भन्दा राम्रो खेल खेल्यौं, आफूभन्दा बलिया भनेका टीमहरुलाई जित्यौं, सेमीफाइनलमा पुग्यौं । खुसी हुनका लागि पर्याप्त छैन र ? संसार ध्वस्त हुन लाग्या छैन, अर्को पटक जितौंला नि । तर पाएको सफलतालाई बिर्सेर असफलता सम्झेर दुःखी किन हुनु प¥यो हामीलाई ? हामी सामान किस्तावन्दीमा खोज्छौं, उपलव्धि र हर्ष चाहिँ एकमुष्ठै चाहिन्छ, तुरुन्तै चाहिन्छ, आजै अहिल्यै चाहिन्छ हामीलाई ।
खेललाई युद्धको रुपमा किन लिन थाल्यौं हामी ? आवतजावतको सहजता, भाषा र संस्कृतिको समानताका कारण हाम्रो सिनेमा, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति भ्रमण, हेराई बुझाइ र भोगाई सँधै छिमेकबाट प्रभावित भएको छ । हामीले जे पनि धेरैजसो उतैबाट सिक्ने गरेका छौं । खेललाई युद्ध, महाभारत र समरका रुपमा प्रस्तुत गर्ने उताका संचारमाध्यमका आक्रामक शैलीले हामीलाई पनि त्यस्तै बन्न प्रेरित गरेको छ । हाम्रा संचारमाध्यमहरुले पनि त्यही सिकेका छन् । हामी त्यही बाटो हिंडिरहेका छौं । यो आफू र खेलाडी दुबैमाथि अन्याय हो ।
"आँखा र कानले, यो हाम्रो मुखले केके गर्ने हो ?
यी सब सिकौं, हामीले सिकौं अब हामीले"
धेरै अघिको कुरा हो, विद्यालय जीवनमा हुँदाखेरिको । पाँच कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीहरु राणाहरुले बनाएका दरवारको बीचको चोकमा लाममा उभिएका हुन्थ्यौं र थपडी बजाइबजाइ यो गीत गाइरहेका हुन्थ्यौं । सत्यनारायणवहादुर श्रेष्ठले लेखेका यो गीतले भन्थ्यो, संसारमा आँखाले हेर्न र देख्नका लागि, कानले सुन्नका लागि र मुखले बोल्नका लागि सबै कुरा छन् । राम्रा पनि त्यत्ति नै, नराम्रा पनि त्यत्तिनै । तर हामीले विवेकको प्रयोग गरेर राम्रा कुरा मात्र देख्न सक्नुपर्छ, सुन्न सक्नुपर्छ, बोल्न सक्नुपर्छ ।
माथि उल्लेख भएका कारणले छिमेकको प्रभाव मुक्त हुन सक्दैनौं भने त्यहाँबाट सिक्न सक्ने राम्रा कुराहरु देख्न सिकौं, सुन्न सिकौं र बोल्न सिकौं । यो कुरा खेलमा मात्र हैन राजनीति, संचार र मानसिकतामा पनि त्यत्ति नै लागू हुन्छ ।
"सिकौं अब हामीले........ "
भगवानको पनि कपी-पेष्ट हुन्छ
August 27, 2013 अन्य No comments
एउटा रमाइलो कुरो थाहा भयो आज । भगवानको पनि कपी-पेष्ट हुँदो रहेछ ।
ललितपुरको ठैब गाबिसमा दोलखा भीमसेनको मन्दिर स्थापना भएको छ । पाटनका कारीगरले दोलखा भीमसेनको दुरूस्तै अर्को मू्र्ति कुँदेका हुन् । ठैबका हरेक घर भने जसोबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ बस मानिसहरू दोलखा गएर विधिपू्र्वक पूजाआजा सकेर मूल दोलखा भीमसेनलाई त्यो मूर्तिमा कपी-पेष्ट गरेपछि त्यो मूर्तिले पनि औपचारिक रूपमा दोलखा भीमसेनको मान्यता प्राप्त गरेको हो । दोलखाबाट सो मूर्ति ठैब ल्याएर भीमसेनलाई यहाँ बनाइएको नयाँ मन्दिरमा स्थापना गरिएको छ ।
भाद्र १४ गतेका दिन ठुलो भीमसेन जात्रा मनाइने योजना छ ।
अब दोलखाको चरिकोटसम्म पुग्न नसक्नेहरूले पनि यहीं नजीकै दोलखा भीमसेनको पूजा गर्न सक्नेछन् ।
मेरो मनमा उब्जेको एउटा प्रश्न चाहिँ, देशमा विपत्ति आउन लाग्यो भने दोलखा भीमसेनलाई पसीना आउँछ भन्ने गरिन्छ । अब त्यस्तो बेला के दुबै मूर्तिमा पसीना आउला त ?
म गएँ भने के होला, म गएँ भने के नै होला
को गएर के भएको छ र, म गएर के होला
तै पनि साँच्चै म गएँ भने के होला
म गएँ भने कोही रोला ?
मलाई सम्झिनेहरु पनि होलान्, होलान् मलाई बिर्सने
चाँडै बिर्सने केही होलान् केही धेरै सम्झिने होलान्
सँधै त कसले कसलाई सम्झिन्छ र
कसले कतिज्नेल सम्झिन्छ होला ?
तिमीले कति सम्झिन्छौ होला, कहिलेसम्म सम्झिन्छौ होला ?
म गएँ भने के होला ?
घरको एउटा भित्तामा म एउटा तसवीर बनेर झुण्डिन्छु होला
बालिनेछन् जसको मुनि केही दिन हर बिहान एक जोर धूप
चढाइनेछ जसमाथि केही समय ताजा फूलको माला
फूलको त सिजन हुन्छ, सँधै कहाँ पाइन्छ र
सम्झनाहरु जस्तै, सम्झनाहरुसंगै
ती पनि ओइलाउँछन् होला, सुक्छन् होला
अरु त म गएँ भने के नै होला ?
साँच्चै अनि त मेरा लागि पनि छापिएलान् विरहका समवेदनाहरु
छापिए भने के म पढ्न पाउँछु होला ?
पढे पनि के म रमाउन सक्छु होला
तिमीलाई थाह छ भने भनिदेऊ न मलाई
म जाने ठाउँमा कान्तिपुर आउँछ होला ?
थुप्रै पैसा पो लाग्छ क्यारे त्यो छपाउन पनि
कहाँबाट त्यो पैसा ल्याउँछौ होला
तिमीहरुसंग त पैसा हुन्नथ्यो, जब म भोको भएर तिमीसंग
लाज पचाएर माग्थें केही उधारो
औषधि किन्न नसकेर जब म कोही आफन्त खोज्दै भौंतारिन्थें,
हन्हन्ति ज्वरोले तातेर यो सहरमा
देख्दोरहेनछु त्यति बेला म यी धुमिल आँखाले
भेट्दोरहेनछु म, चिन्दोरहेनछु तिमीहरुलाई
ओहो हेर त आज त यहाँ कहाँबाट
यतिका मान्छेको झुण्ड थुप्रिएको होला
तेल नपुगेका तीन पाँग्रे ट्रलीमा
चुइँचुइँ गर्दै जब ल्याइन्छ
केही मूठा पराल, केही टुक्रा मूढाहरु,
आर्यघाटमा जब म लमतन्न चिम्लेर आँखा शान्तसंग
तिनै दाउरा जस्तै लडेको हुन्छु,
म गएको हेर्न त्यहाँ कति जना उभिनेछन् होला
मेरा कानबाट के छिर्लान् त्यतिबेला
तिमीहरुका समवेदनाका शव्दहरु ?
खुट्याउन सक्लान् के मेरो चेतले
कुन सक्कली र हुन् कुन नक्कली वाक्यहरु ?
औपचारिक होलान्, भावुक होलान्, निरपेक्ष होलान्
कसैको आँखामा आँशु भए
देख्न सक्लान् के तिनलाई
मेरा टोलाएर आकाश ताकिरहेका आँखाहरुले ?
देख्न सके थाहा पाउलान् र के हुन् ती आँशु ?
म गएकोमा बगेका हुन् कि अर्कोे आधा जलेको चिताको धूवाँको पीरो
तिम्रो पनि आँखा पीरो होला ? तिम्रो पनि मन अमिलो होला ?
अवगुणहरु मात्र देख्थ्यौ म बाँचुन्जेल तिमी मेरा
मेरा गुणका पोकापन्तुराहरु चाहिँ
म गएँ भने शायद खोतल्छौ होला
गए पछि त मलाई के थाहा कसलाई के हुन्छ वा हुन्न
भन न, म ज्यूँदै हुँदा मलाई भन
एक चोटि मात्र भए पनि भन
१७ जुलाई २०१३
काग र कोइली
नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ 'बायाँ फन्को' बाट
बिहानी सृष्टिकै अनुपम र अद्भुत क्षण। महत्त्वपूर्ण पनि उत्तिकै। किनभने, बिहानीले नयाँ दिन ल्याउँछ। अँध्यारोलाई पन्छाएर हाम्रो वरपिरि उज्यालोका किरण छर्छ। रात निष्त्रिmयताको परिचायक हो, बिहानी जागरुकताको। सक्रियताले उपलब्धि ल्याउँछ, उपलब्धिले आत्मसन्तुष्टि। बिहान हुने प्रक्रिया पनि बडो सुन्दर हुन्छ। चाँडै उठ्ने हुनाले म हरेक बिहानीको आनन्द उठाउँछु। केही दिनअघिको एक बिहानी। आकाश बल्ल तीनपत्रे रंगमा पोतिएर खुल्दै थियो। अलि पर सामुदायिक वनमा चराहरू चिरबिराउन थालिसकेका थिए।
नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्ब 'बायाँ फन्को' मा चितवनका एक प्राध्यापकज्यूले पठाउनुभएको यो प्रतिकृया निकै प्रेरणादायी छ ।
May 03, 2013 english, whatever I feel No comments
I have been dreaming the same thing every night from last week.
I am walking properly without the aid of crutches. Its been almost two months that I am down withamedical problem called 'Bone Marrow Edema' of right knee. It started asasmall pain when i walked. I did not take it seriously and continued my normal activities. It grew worse and finally I had to stop.
It is said that bone marrow edema,aswelling in the marrow, takes two to three months to completely heal.
What I have realized after prolonged inactivity is such problems have psychological angle as well. After following the physiotherapy and providing proper rest for the knee, I think I do not have that pain in the knee anymore. But, When I try to walk, the command center of the nerves in brain simply deny. It does not order to step. I am afraid that if I step or put pressure on my right foot, I might again get that pain and result in extended inactivity.
मन नपरेका साथीहरू
April 27, 2013 कान्तिपुर कोसेली, नेपाली, प्रकाशित No comments
२०७० वैशाख १४ कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित
हामी आमाबाबु छान्न सक्दैनौं, दाजुभाइ वा अरू नातागोता छान्न सक्दैनौं । रमाइलो मेलामा हात खाली नजाने चिठ्ठा खेल्दा पुरस्कारको रूपमा जेजस्तो सामान परे पनि चुइँक्क बोल्न नपाएको जस्तो हुन्छ नातागोता । साथीहरू भनेको मात्र यस्ता हुन्, जो तपाईं आफ्नो मनले बनाउन पाउनुहुन्छ । तर नचाहँदा नचाहँदै पनि, फुट्या आँखाले देख्न नसकिनेहरूलाई साथी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने कस्तो हुन्छ होला ? सुन्दाखेरी तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्दैन होला । म पनि अरूले भनेको भए पत्याउन्नथिएँ होला ।
तर केही दिन भयो, अचेल मेरा दुईजना नचाहेको साथीहरू बनेका छन् । तिनीहरूसँग मेरो पूरै समय बितिरहेको छ । ती जुम्ल्याहा दाजुभाइहरूलाई राम्ररी चिन्ने प्रयासमा छु म । ठ्याक्कै एउटै अनुहारका छन् ती दुवै । काटीकुटी उस्तै, दुरुस्तै । यी दाजुभाइ यस्ता हुन्, अहिलेको मेरोजस्तो अवस्थामा तिनको साथ नभई मान्छेलाई सुख्खै छैन । तर पनि हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ, तिनको संगत गर्नु नपरोस् । कुनै दिन तिनको भर पर्नुपर्ला भनेर मैले त चिताएको पनि थिइनँ । तर अचानक ती मेरो जिन्दगीमा आए । म चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो ती जसरी आएका थिए, त्यसरी नै भागून् । ती मेरा नयाँ साथीहरूको सहाराबिना आजकल म हिँड्न पनि सक्दिनँ । समयभन्दा अघि हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिलेसम्मका मान्यताहरू यतिबेला चकनाचुर भएका छन् । म त समयसँगै पनि हैन त्योभन्दा धेरै पछि परिसकेको छु जस्तो लाग्न थालेको छ आजकल । ती साथीहरूले सहारा नदिने पनि हैनन् । तर त्यो सहारा लिएर मलाई पटक्कै खुसी लाग्दैन ।
यायावर : पुस्तक समीक्षा
April 19, 2013 Yayavar, नेपाली, यायावर2comments
akhijhyal.com बाट तानिएको
‘बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल हेर्न पाइयोस, यी हातले संधै-संधै नेपाल लेख्न पाइयोस।’ अजङ्गको कपाल, चस्मेलु हेराइ, हातमा पेन्ट ब्रस, नाम थाहा नभएपनि यी म्युजिक भिडियोका पेन्टरलाइ मैले दशक पहिलेनै याद गरिसकेको थिएँ। समयको क्रमसंगै यिनलाई टेलिभिजनको पर्दामा देखिने क्रम निरन्तर रह्यो, घरि गीतको भिडियोमा नाचिरहेका, घरि कुनै कार्यक्रममा उद्घोषण गरिरहेका। विस्तारै फिल्म क्षेत्रसंग सम्बन्धित खबरमा पनि यिनी देखिन थाले। राष्ट्रिय साप्ताहिकमा फन्को मारिरहेको अवस्थामा पनि यिनलाई धेरै भेटियो। विभिन्न रुपमार्फत समाजको गहिराइ नाप्न सफल यिनै बहुमुखी प्रतिभाका धनिले हालै आफ्नो अलग रुपको दर्शन गराए, ब्रजेश खनाल – याज अ नोभलिस्ट।
“पैसा त जसले जसरि पनि कमाउन सक्छ, धनि त त्यो हो जसले सम्बन्धहरु कमाउन सक्छ।” यायावरलाइ यिनै सम्बन्धका पाटा केलाइएको अभिव्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। उपन्यासको मुलपात्र वैकुण्ठ र उसकी श्रीमती जुनेलीबिच वैचारिक अभिव्यक्ति विहिन सम्बन्ध रहेको छ। किशोरावस्था देखिनै परिचित रहेता पनि घटना र परिस्थितिले उनीहरुलाई एकआपसमा अन्जान बनाएको छ। जीवनकालमा भोगेको एक बज्रपातबाट माथि उठ्न नसकेका यी दुइलाइ दशवर्षे द्वन्दका क्रममा हिंशा भोगेका वा परिवारजन गुमाएको शोकमा अझै मानसिक रुपमा छट्पटाइरहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधि पात्रका रुपमा लिन सकिन्छ।
कालो राम पात्र समाजमा रहेका खबर चलन, व्यवहार र कुसंस्कारको उपज हो। हाम्रो समाजका ‘गब्बर सिंह’ वर्गको प्रतिनिधिका रुपमा उसलाई उभ्याइएको छ। विशेषत: अशिक्षा र अज्ञानतामा पिल्सिएको ग्रामिण समाजमा उ र उजस्तै पात्रहरुले आफ्नो धाक धक्कु प्रयोग गरेर निमुखा गाउँलेको नाजायज फाइदा उठाउने गरेका छन्। वैकुण्ठ-कालो राम भिडन्तलाइ अन्यायको पराकाष्ठा सहन नसकी प्रतिकारमा होमिएका शोषित वर्गहरुको आक्रोसको उपजका रुपमा चित्रण गरिएको छ।
April 19, 2013 अन्य, नेपाली2comments
नयाँ शीशीमा खन्याएर पुरानै रक्सी
फेरि आएको छ नयाँ वर्ष
चियर्स भनेर गिलास जुधाउन
म बिर्सेर उसका पुराना आनीबानी
घुट्क्याइदिन्छु उसको सगुन
चररररररर गर्दै घाँटीदेखि पेटसम्म पोलेर जाने
उसका पुरानै वाचाहरू
अलिअलि रमरम बनाउँछ
अलिअलि झमझम बनाउँछ
अनि आशावादी म सोच्न थाल्छु
यसपालि त सुध्रेको जस्तो छ
नयाँ वर्षको अनुहार टाँसेर
कस्मेटिक सर्जरी गरेर आएको
यो पुरानै ढँटुवा
कहिले हीरो-कहिले भिलेन
April 16, 2013 Yayavar, नेपाली, यायावर No comments
A review by Janak Raj Sapkota published in Nepal New Magazine of April 14, 2013
रुसी साहित्यकार भ्लादिमिर नाभेकोभको उपन्यास लोलितामा प्रमुख पात्र छ, हम्बर्ट। अधबैँसे हम्बर्ट हरदम बचेखुचेको बैँस अनि ताकत यौन सन्तुष्टिमा खर्चिन्छ। तैपनि, उसको तिर्सना कहिल्यै मेटिँदैन। ब्रजेशको उपन्यास यायावरमा प्रमुख पात्र छ, बैकुण्ठे। उसको केटौले, जवानी र अधबैँसै उमेर यौनको अतृप्त कुण्ठामा बित्छ। चरम मनोरोगको सिकार भएको मुख्य पात्र बैकुण्ठेका अनुभूति, संवेग र आवेगहरू नै उपन्यासको कथा हो। मुख्य पात्रसँग फिल्मका कथामा झैँ अनेकन् पात्रहरू ठोक्किन आइपुग्छन्। हँुइकिरहेको बसको झ्यालबाट स्वाट्ट देखिने र हराई जाने दृश्यजस्तै पात्रहरू पनि उपन्यासमा देखा पर्छन्। उपन्यासको धागो भने बैकुण्ठेको मनभित्र गुम्सिएको अतृप्त यौन कुण्ठासँगै अगाडि बढेको छ। हम्बर्ट र बैकुण्ठे विपरीत धु्रवका पात्र हुन्। एउटा यौनका निम्ति मरमिेट्ने, अर्को यौनबाट पलायन हुने।
हामीले टाइ भिरेका छौं
एउटा पासो भिरेर आफ्नै गलामा
ऐना हेरेर गमक्क परेका छौं
टाइले हामीलाई लाग्छ,
विशिष्ट बनाएको छ
टाइले हाम्रो व्यक्तित्वलाई
केही पत्र माथि चढाएको छ
टाइ लगाउनका लागि नसिलाइएका
कलर नमिलेका कमेजमाथि नै पनि
करबलले गाँठो कस्द
हामीले टाइ भिरेका छौं ।
March 24, 2013 Yayavar, नेपाली, यायावर No comments
मेरो उपन्यास यायावरको एक अपरिचित पाठक नरेन्द्र पराशरको समीक्षा
मुग्लिङदेखि नौबिसेबीचको कुनै स्थानमा रहेको प्रहरी कार्यालयको इन्स्पेक्टर प्रताप उपन्यास यायावरको पहिलो पात्र हो । पहिलो पात्रको पहिलो वाक्य नै अपशब्दसहित उपन्यास अगाडि बढ्छ । राजमार्गमा बेफिक्री गुडिरहेका अनेक प्रकारका गाडीहरू, तिनको हर्न र इन्जिनको कर्कश आवाजले प्रताडित भइरहने प्रतापले राति कार्यालय परिसर छेउछाउ भयानक आवाज सुन्छ र बस खसेको ठहर गर्छ । अनि ऊ उद्धारका लागि आफ्ना मातहतका जवानहरू लिएर पिचमा टायर घस्रिएको संकेत हेर्दै त्रिशूली नदीतिर लाग्छ । अँध्यारोमा छामछुम गर्दै निकै दुःख गरेर वीभत्सरूपले बस पल्टिएको ठाउँसम्म पुग्ने क्रममा उसले एउटा झोला भेटाउँछ र यसो खोलेर हेर्छ । त्यसमा नोटका बिटा दखेर ऊ त्यस झोलालाई राम्ररी काँधमा भिर्छ र जवानहरूलाई राम्ररी खट्ने आदेश गरेर स्वयं ऊ भने निवासतिर उकालो लाग्छ । उसले निकै सजग र सतर्क भएर उक्त झोला खोल्छ । त्यसमा वैकुण्ठ नामको नागरिकता, तीन लाख रूपैयाँका अतिरिक्त एउटा पेन ड्राइभ पनि फेला पर्छ । कम्प्युटरमा खासै ज्ञान नभएको प्रताप स.इ राजारामको सहयोगले पेन ड्राइभ खोल्छ । जम्मा जम्मी दुईवटा फोल्डर भएको पेन ड्राइभमा एउटामा बच्चुकैलाशका गीतहरूको सङ्कलन हुन्छ भने अर्कोमा ‘गोप्य’ लेखिएको हुन्छ । यही ‘गोप्य’ लेखिएको फायल फन्टको समस्याका कारण आफैँ खोल्न नसकेकोले प्रतापले फायल खोल्न स.इ. राजारामको सहयोग लिन पुगेको हुन्छ । अब प्रताप त्यही गोप्य फायल गोप्य तरिकाले पढ्न थाल्छ र सुरू हुन्छ उपन्यास यायावरको मूल यात्रा ।
February 25, 2013 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
February 01, 2013 अन्य, कविता, नेपाली No comments
अझै पनि बाँकी छ मसंग
मेरो त्यही एकजोर सूट
बर्षौं अघि मैले मेरो बिहेमा हालेको
February 01, 2013 english, whatever I feel No comments
There is one very interesting definition of cigarette. It says "Tobacco rolled pipe ofapaper which has fire on one side andafool on the other." Indeed, onlyafool smokes. Before every smokers reading this plan to demonstrate against me, let me admit that I am one of them. It is suchabad habit, is very addictive and very hard to quit. I have tried to give it up and have succeeded several times. Quitting smoking is so easy thatasmoker does it frequently and keeps on doing so.